Casual Metal ခေါင်းခွံပုံစံ PU သားရေပိုက်ဆံအိတ် - အခမဲ့သင်္ဘောတင်ဆောင်ခနှင့်အခွန်မပါ ၀ ယ်ပါ WoopShop®
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးသတ္တုဦးခေါင်းခွံစံနမူနာမှ PU သားရေ Long ကပိုက်ဆံအိတ်
$15.42 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $28.04
အရောင် ပြာသော ရှေ Black က
ပြာသော ရှေ Black က
ကျပန်းသတ္တုခေါင်းခွံပုံစံ PU သားရေပိုက်ဆံအိတ် - အပြာရောင် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ပြည်ထဲရေး: ပြည်ထဲရေးပေါက် Pocket, Cell Phone Pocket, ပြည်ထဲရေးဇစ် Pocket, ပြည်ထဲရေး compartment, ဇစ်အိတ်, အကြွေစေ့ Pocket, compartment မှတ်ချက်, ကတ် Holder
item အကျယ်: 10.5cm
item အမြင့်: 3cm
item အလျား: 21cm
item အလေးချိန်: ~ 290g
ပစ္စည်းရေးစပ်သီကုံး: PU သားရေ
pattern အမျိုးအစား: ဉီးခေါင်းခွံ
အရောင်:5အရောင်များ
Size: 21 * 10.5 * 3cm
attribute: ပိုက်ဆံအိတ်, အမျိုးသမီးများပိုက်ဆံအိတ်, Portefeuille femme, ပိုက်ဆံအိတ်
အရာအားလုံးစူပါပါ! ဖော်ပြချက်နှင့်အတူအပြည့်အဝကိုက်ညီသည်။ ကုန်စည်နှင့်ဆိုင်အကြံပြု!
ဂရိတ်ချောင်းဆိုး !!!! ကောင်းစွာအသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ !!! ပြူးကြည့်အခြားသူများကိုဆွဲယူ !!!
အလွန်အေးမြသောပိုက်ဆံအိတ်ဒါမှမဟုတ်ပင် klatch ။ စူပါကြည့်! အားလုံးကောင်းမွန်စွာပြုကြ, ကောင်းစွာထုပ်ပေးထားခဲ့သည်။ ခရီးခြေရာခံ။ အကြံပြုကျိန်းသေပျော်ရွှင်!
တစ်နေရာရာမှာ 99% ပေါ်မင်္ဂလာကုန်ပစ္စည်းများ။ သေးငယ်လွန်းသည့်, အားနည်းချက်တွေ-ခက်ခဲ intermeddle ကတ်များအိတ်ကပ်၏။ dispatch သည့် နေ့မှစ. အကြောင်းကို 2,5 ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်အတော်လေးလျင်မြန်စွာ, ယူကရိန်းရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ငါကှကျ unpacked အဖြစ်ပျော်စရာထုပ်ပိုးကျွန်မခင်ပွန်းပူဖောင်းပစ်လိုက်ပါခဲ့သည်။ woopshop ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မရှိမေးခွန်းများကိုအပေါင်းတို့, အေးမြ! အလွန်သင်သည် much.thank!
ဖော်ပြချက်နှင့်ကိုက်ညီဂရိတ်ပိုက်ဆံအိတ်, အရာအားလုံးနဲ့တူ, ဒုတိယတာ။ သတ္တုချွတ်ကွာ blackened လှပသောဆက်စပ်ပစ္စည်းသည်, ကွင်းဆက်အလှဆင်အဖြစ်မဟုတ်ဘဲမတည်ငြိမ်သောဖြစ်ပါတယ်။ တစ်လနှင့် ပတ်သက်. ပေးပို့။ လှပသောစတိုင်အရာငါသည်သင်တို့ကိုဝယ်ခြင်းငှါအကြံပြုသည်။